FAAFI ECHO | ECHO Minnesota
» FAAFI ECHO
Naga caawi sidaii aan ku gaadhi lahayn jaalliyadaha ku hadla af ingiriisiga aan badnayn ee ku nool Minnesota iyo kuwa waddanka oo dhan ku nool ayadoo aad nala shaqaysid qaybina macluumaadka muhiimka ah oo laga yaabo in uu ka faaiido qof kasta ee aad taqaanno.
Dirso ECHO DVDs (DVDda ECHO) si aad ugu qaybisid saaxiibada, reerka – ama jaalliyadaha aad u adeegtid.
Ku soo guuri warqadda dhabta ee ECHO:
La xariir ECHO ilaha bogga ee internetka ururkaaga, ama
Ku soo lifaaq ECHO fiidiyaasha YouTube ee booggaaga internetka si lagu caawiyo qaybinta macluumaad caafimaadka iyo ammaanka ee muhiiima sida u baxad weyn ee suurtagala.
Ka mid noqo saaxiibbadenna na xiseeya ee Facebook, nalaga soco Twitter, ama isku qor kanaalkaaga YouTube.
Isku qor Internetka si aad ku heshid macluumaadkii u dambeeyay ee ECHO ee caafimaadka iyo ammaanka iyo jadwalka telefishinka ECHO iyo in aad la wadaagto waxa aad ka baratid saaxibbadaada, reerkaaga ama jaalliyadaheenna aad u adeegto.
Soo dir sheekadaada ECHO. Ma ka faa’iidaysatay ilaaha waxbarashada ee ECHO? Ma isticmaashay ilaha ECHO si aad ula xariirtid jaalliyadaha ku hadla af Ingiriisi yar? Waxa aan rabnaa in aan hadalkaaga helno! Halkaan riix sii aad nala wadaagtid sheekadaada guusha ah ee ECHO.